Samachar Batika || News from Nepal » तपाइले चलाईरहेको मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ ? यसरी पत्ता लगाउनुस्
तपाइले चलाईरहेको मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ ? यसरी पत्ता लगाउनुस्
नेपाल टेलिकमले छिट्टै नाम दर्ता भएकाे सिम सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै चलाउन पाउने नियम ल्याउन लागेकाे छ । तपाईले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल अर्कैको नाममा दर्ता त छैन ?
सरकारी सेवा विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न नागरिक एप तयार भइरहेको छ । त्यसका लागि मोबाइल नम्बरलाई व्यक्तिको पहिचान नम्बरको रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको छ । यसले गर्दा अब अर्काको नाममा दर्ता मोबाइल नम्बर चलाउन पाइनेछैन । तपाईले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बर तपाईकै नाममा हुन जरुरी छ
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०३:४६